Gaas oo go’aanka Deni ku tilmaamay mid ‘lagu fududaaday’ | Keydmedia
Gaas oo go’aanka Deni ku tilmaamay mid ‘lagu fududaaday’
Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in go'aanka uu Madaxweyne Deni ku qaadacay shirka Dhuusamareeb uu ahaa mid lagu fududaaday, islamarkaana aanu sax aheyn, isagoona intaa ku daray in sabab caafimaad kaliya looga baaqsan karay shirka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka horyimid tallaabadii uu Madaxweyne Deni uga baaqday shirkii Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay 21 bishan ee 2020.
Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in go'aanka uu Deni ku qaadacay shirka Dhuusamareeb uu ahaa mid lagu fududaaday, islamarkaana aanu sax aheyn, isagoona intaa ku daray in sabab caafimaad kaliya looga baaqsan karay shirka.
“Madasha Dhuusamareeb waa madal aan laga maqnaan karin, qofka dhibaato caafimaad ama dhibaato weyn qaba mooyee, laakiin in la qaadaco oo aan la tagin waxay ila tahay inuu yahay go’aan aan sax aheyn oo lagu fududaaday,” ayuu yiri Gaas
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale sheegay in xilligaan aan loo baahneyn in khalalaaso la abuuro, ismarkaana meesha aysan oolin wax shirka lagu diido karo, maadaama looga hadlayay masiirka Ummadda Soomaaliyeed, Puntland ay qeyb ka tahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxda maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeele, Galmudug iyo gobolka Banaadir oo muddo todobaad ah ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa soo gabagabeyay shirkii wada-tashiga Dowladda iyo dowlad goboleedyada, kaasoo aanu qeyb ka aheyn Puntland iyo Jubbaland.
Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa shuruud ku xiray ka qeyb galka shirkaas, waxaana shuruudahaas ka mid ahaa in ay meesha ka maqantahay xukuumaddii fulin laheyd heshiisyada lagu gaaro shirka maadaama tii hore la riday.